यस्ता पो छिमेकी- ब्लग - कान्तिपुर समाचार
छरछिमेककै व्यवहारले म र मेरो परिवारमा गज्जबको आत्मबल आयो । दुई दिनमै मभित्रको मनोसामाजिक त्रास शून्यमा झर्‍यो । श्रीमती र भतिजीलाई निर्धक्कसँग मेरो स्याहारमा ध्यान दिने उत्साह मिल्यो । सुरूमा न्यास्रो मानिरहेका छोराछोरीको मुहारमा पनि चमक देखियो । म नियमित दैनिकीमा फर्किन सफल भएँ ।
पृथ्वीबहादुर अंकलले भन्नुभयो, ‘बाबु केही पनि चिन्ता नगर्नू, मैले तिमीलाई छिट्टै सञ्चो होस् भनेर कुलदेउता भाकल गरेको छु ।’
आश्विन १६, २०७७ कलेन्द्र सेजुवाल
कोरोना संक्रमित र उनको परिवारलाई हुने सामाजिक दुर्व्यवहारका दृष्टान्तबारे मैले सुनेको मात्र नभई आफैं स्थलगत रिपोर्टिङ पनि गरेको छु । सामाजिक अभियन्ता सजना सुनारले कोरोनामुक्त भएको एक महिना बित्दासमेत वीरेन्द्रनगर–१ प्रगतिशील टोलमा आफैं र परिवारले भोगेको दुर्व्यवहारको कथा लेखेको थिएँ । उक्त घटनाले पनि मलाई कोरोना भएपछि सबैभन्दा बढी डर समाजकै लागेको थियो । ‘म त घरभित्र बसुँला, परिवारका अन्य सदस्यलाई छरछिमेकले कसरी हेर्लान् ?’ यस्तै तर्कना मनमा खेलिरहेका थिए ।
भट्टराई बाउछोरी त पेशाको कारण पनि कोरोनासँग सचेत हुने भइहाले । घर सामुन्नेका छिमेकी चन्द्रबहादुर ठाडा भाइ र उनकी श्रीमती लक्ष्मीको ‘कोरोना–चेत’ पनि निकै उच्च थियो । आफ्नै घरमा खाजापसल चलाएका उनीहरूले मलाई ढाडस दिँदै भने, ‘दाइ यो (कोरोना) सबैलाई त हुन्छ नि, परीक्षण नगरेर पो १ कतै हामीलाई पनि छ कि ।’ उनीहरूले आफ्नो खाजा पसलमा बनेको स्वादिलो र पोसिलो खानेकुरा नियमित दिइरहे । कोरोना भ्रमबाट ग्रसित अन्य केहीलाई छिमेकी बहिनी हरिमाया श्रीषले मज्जाले सम्झाएकी थिइन् । उनी भन्थिन्, ‘कोरोना कसलाई छैन र ? तर सजक बन्नुपर्छ, भइहाल्यो भने डराउनु पर्दैन ।’
काठमाडौं अफिसबाट अग्रजहरूले ‘मज्जासँग आराम गर्नुहोस्’ भनेर सुझाव दिनुभएको थियो । तर, परिवार र छिमेकबाट पाएको ऊर्जाले मलाई मानसिक रूपमा स्वस्थ बनाइसकेको हुँदा काम गर्न कुनै कठिनाइ भएन । शारीरिक रूपमा त म स्वस्थ नै थिएँ । मैले आइसोलेसनबाटै ब्युरोको संयोजन र समाचार सम्पादन मात्र गरिनँ, डा. गोविन्द केसीको सत्याग्रह र हुम्लाको नेपाल–चीन सीमासम्बन्धी समाचार पनि लेखें ।
दुई साताको आइसोलेसनपछि आइतबार पुनः स्वास्थ्य परीक्षणको लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालयमा पुगेकी एक जना महिला पत्रकारले त्यस्तै छनक दिने अनुभूति सुनाइन् । उनका अनुसार कोरोना संक्रमण हुनुअघिसम्म निकै मन मिल्ने छिमेकीहरू अहिले के–कसो छ भनेर सोध्न त के घरमा सिधा पनि हेर्दैनन् । ‘त्यतिसम्म त ठिकै थियो, १ वर्षकी छोरीलाई समेत अछुतको व्यवहार गर्दा मन निकै कुँडिन्छ,’ उनले भनिन् । अहिले सरकारले लक्षण नदेखिएका र सामान्य अवस्थाका संक्रमितलाई होम आइसोलेसनमै बस्न प्रेरित गरिरहेको छ । तर, होम आइसोलेसनको वातावरण समाज (छिमेकी) को व्यवहारमा निर्भर हुन्छ ।
प्रकाशित : आश्विन १६, २०७७ ०९:४६
नुवाकोटमा खुलेको ८ दिनमै विद्यालय बन्द
आश्विन १६, २०७७ कृष्ण थापा
नुवाकोट — ६ महिनापछि खुलेका विद्यालय आठ दिनमै स्थानीय प्रशासनको आदेशमा बन्द भएका छन् । बल्ल बल्ल पढ्न पाएका विद्यार्थी निराश भएका छन् ।
लिखु गाउँपालिका–३ मालाकोटको गणेशसूर्य आधारभूत विद्यालयका अभिभावक पुष्पलाल श्रेष्ठले भने ‘स्कुल खुल्यो छोराछोरीले पढ्न नपाउने भनेर खुसी हुन नपाउँदै बन्द भए । पढाइ बिग्रने चिन्ता भयो ।’
गत साताबाट विद्यालयमा सिकाइ केन्द्र स्थापना गरेर विद्यार्थीलाई ‘काउन्सिलिङ’ गरिँदै आएको प्रधानाध्यापक दुर्गाराज पाण्डेले बताए । उनले भने ‘आलोपालो १२ बजेसम्म पढाउने गरिएको थियो ।’ अभिभावकहरू विद्यालय बन्द गर्न नमानेको उनले बताए ।
‘अभिभावकले एक घण्टा भए पनि मास्क, सेनिटाइजर लगाएर पठाउँछौं भनेर पढाउन जोड गरेका छन् । के गर्ने/नगर्ने हामी चेपुवामा परियो,’ उनले भने । विद्यालयले हाललाई दैनिक दुई घण्टा घरमै विद्यार्थीलाई गृहकार्य गर्न लगाएर अध्ययनमा जोडिराख्न शिक्षकहरूलाई खटाएको छ ।
स्थानीय प्रशासनको आदेशअनुसार बन्द गर्न भनिएको भए पनि यो अन्योलले शैक्षिक क्षेत्र प्रभावित भएको भन्दै लिखु गाउँपालिकाका अध्यक्ष ध्रुव श्रेष्ठले चिन्ता व्यक्त गरे ।